Twitter dia milaza fa manavakavaka ny vahoaka japoney ny anime fanart #Blacktober anime (adihevitra) - Hafa
Twitter dia milaza fa manavakavaka ny vahoaka japoney ny anime fanart #Blacktober anime (adihevitra)
Volana nentim-paharazana mainty ny volana oktobra. Saingy noho ny antony sasany, ny 'mainty' dia mitaona olona maro be.
Tsy ny SJW'S ihany, fa betsaka noho ny olon-kafa rehetra - ny fanavakavaham-bolon-koditra izay mankahala ny mahita zavatra tsara mifamatotra amin'ny kolontsaina mainty.
Tsy misy toerana toa an'i Twitter raha ny resaka mamorona resabe avy amin'ny rivotra mahia amin'ny zavatra izay tsy tokony mampiady hevitra.
Ny sasany amin'ireo endri-tsarimihetsika mainty ratsy badass izay tsy misy mandray anjara #blacktober manao zavatra amin'ny. Fa tohizo, heveriko fa mila deku mainty fahadimy isika anio. pic.twitter.com/uiljlPCdg8
- Joestradamus & # x1f1fb; & # x1f1ea; ⚤ & # x1f51e; (@OneBizarreJoe) 18 Oktobra 2020
Raiso ity tweet ity ho ohatra iray amin'ny #Blacktober - tenifototra mankalaza ireo tarehintsoratra mainty amin'ny anime, sarimihetsika, na hafa.
Ny sasany amin'ireo valin'ity bitsika ity dia very saina. Tsy hizara azy eto aho, azonao atao sahady ny maminavina ny dikan'izany.
Ampahany amin'ny #blacktober koa ny fakana endri-tsoratra misy, ary avy eo ny fananana mpanakanto hamerina azy io ary hametahana ny 'spin' -n'izy ireo.
Amin'ity tranga ity dia midika hoe mahita izay ho endriny raha miteny, vilia dia noforonina ho toetra mainty.
Na Nezuko na Senku nalaina tahaka ny mainty.
Ny tanjona dia satria tsy betsaka endri-tsoratra mainty amin'ny sarimiaina araka ny fijoroany. Noho izany dia fotoana iray hahitanao izay ho endrik'izany.
Kitapo fanamboarana pikantsary ho an'ny #blacktober !!! & # x1f496; & # x1f496; & # x1f496; pic.twitter.com/NEVNFxQuat
- & # x1f383; SpookyJay & # x1f383; (@UsagiJay) 6 Oktobra 2020
anime naoty ratsy indrindra tamin'ny fotoana rehetra
#blacktober fanovana anime # 8: Senku pic.twitter.com/Emo7RSNwvb
- Jaden: CEO an'ny Senku Defender's | #Blacktober (@StoneWrldReview) 8 Oktobra 2020
manaraka ho an'ny #blacktober manana isika #Nezuko From #DemonSlayer & # x1f495; pic.twitter.com/CyYwY1Ok5p
- JVZMINA X ART (@jvzmina) 13 Oktobra 2020
Hetsika mahafinaritra iray izao no lazaina fa 'manavakavaka' amin'ny Japoney
Tokony hijanona ianao mba hanavakavaka ny Japoney amin'ny fanaovana mainty ny tarehin-tsarimihetsika dieny izao. Tsy tsapa ny fanajana ny tany am-boalohany. Aziatika ny Japoney, ary POC. Heveriko fa na ny fanasana mainty sy fotsy dia tsy olana fa tsy te hampiasaina amin'ny zavatra politika aho. #blacktober
- sidina (@shelrinss) 10 Oktobra 2020
Olona mandray anjara #blacktober tokony ho mailo fa fanavakavaham-bolon-koditra amin'ny Japoney izy ireo.
Ohatra, amin'ity tweet ity dia nosoloina mainty i Deku.
Izahay Japoney mahatsapa fa fanasana mainty.
Mangalatra ny mombamomba ireo sarimiaina japoney. https://t.co/25ysvBkeLV
- fanampiana (@aid_exex) 12 Oktobra 2020
“Fanavakavaham-bolon-koditra sa tsia? Inona no tsy itovizany amin'ny fotsifotsy? ' https://t.co/W9YsDFLQkK
Nandika hevitra vitsivitsy momba izany aho.
172 ny heviny fa malaina aho mandika azy rehetra. pic.twitter.com/fiGQ1St0bB
- Seriema & # x1f51e; (@ seri3ma) 13 Oktobra 2020
anime nantsoina tsara indrindra tamin'ny fotoana rehetra
Ny mahaliana amin'ireo fanehoan-kevitra ireo dia ny Amerikanina hatrany, amin'ny teny Tweeter izay manana ny litera Japoney 'manasa fotsy'.
Tsy misy olona velon-taraina na tezitra na mamorona resabe avy eo.
Tsy maintsy manontany tena ianao hoe maninona, na dia milaza aza ny antony.
Nanaiky ny resabe ny mpankafy Anime
BC blacktober dia momba ny famerenana endrika amam-panao anime mba hahafantarana azy ireo tsara kokoa & hamorona fanart mahafinaritra ho an'ny Oktobra. Raha ny fanasana fotsy no mpamafa ny rafitra POC nosoratana am-boalohany tamin'ny alàlan'ny fanilihana mpilalao sarimihetsika fotsy hilalao azy ireo & hamonoana ireo POC efa kely fatra
- corey (@coreyxmadison) 9 Oktobra 2020
“Blacktober dia momba ny famerenana endrika sary amam-panao anime hahafantarana azy ireo tsara kokoa & hamorona fanart mahafinaritra ho an'ny Oktobra. Raha ny fanasana fotsy no mpamafa ny rafitra POC nosoratana am-boalohany tamin'ny alàlan'ny fanilihana mpilalao sarimihetsika fotsy hilalao azy ireo & hamonoana ireo POC efa kely fatra. ”
izany dia ny #blacktober ao anaty fehezanteny fohy, mandra-pahatongan'ny oliva Twitter izay namadika azy ho zavatra ratsy.
Tsy hamoaka an'ity amin'ny ankapobeny aho fa ity no iray amin'ireo antony tsy hanaovako blacktober intsony.
TSY IZAO NO LAZAIN'NY OLONA,
Blacktober dia tena tsara tarehy mahita olona toa ahy amin'ny franchise tiako rehetra fa sarotra ihany koa ny mahita ireo namako iharan'ny herisetra pic.twitter.com/MQaDZkamZB
- & # x1f496; ☾Space gay unit-23 ☾ & # x1f496; (@Petalromance) 9 Oktobra 2020
Weebs eto tezitra amin'ny redaws sy ny art art ho an'ny #blacktober dia ireo mpankafy fanavakavaham-bolon-koditra ihany izay milaza fa ny mainty hoditra dia tsy afaka manao kilalao sarimiaina anime fotsy.
- C (@MissPandulce) 11 Oktobra 2020
Tsy afaka mijery anime toy ny Attack on Titan ianao ary mikiakiaka amin'ireo olona manao blacktober mba 'tsy hanao politika intsony ny anime !!' raha ny fitohizan'ny tohodrano manontolo dia fanfiksiana WWII.
koa ny zanak'olombelona sy ny volon-kodiny dia tsy fomba fijery politika ka angamba akombony ny fikitika
- Tadidiko io scenario io; (@tachipaws) 10 Oktobra 2020
Ny twitter Anime sy ny ady ataon'izy ireo amin'ny fironana mainty dia manome fahasimbana ao anaty ao amin'ny ati-doha
- & # x1f375; I Elly & # x1f375; (@ snacks_fruity2) 11 Oktobra 2020
ny adihevitra dia ny fanavakavaham-bolon-koditra ny fandoroana mainty ireo tarehin-doko tsy Mainty, saingy mino aho fa izany no bullshit lmao. anime dia manana tantaram-pitaka (indraindray mampihoron-koditra) maneho diso ny mainty hoditra, ary i Blacktober no fotoana ananan'ireo mpanakanto sary an-tsaina ny fisehoana fa tsy nomena azy ireo
- olon-kendry (@direemblem) 11 Oktobra 2020
'Ny adihevitra dia ny fanavakavaham-bolon-koditra ny fandoroana mainty ireo tarehin-doko tsy Mainty, saingy mieritreritra aho fa izany no lshao maloto. anime dia manana tantaram-pitenenana (indraindray mampihoron-koditra) maneho ny endrik'ireo mainty hoditra, ary i Blacktober no fotoana ananan'ireo mpanakanto sary an-tsaina ny fisehoana fa tsy nomena azy ireo. ”
Fa maninona no mifantoka amin'ny 'hazakazaka' be loatra?
Mazava ho azy izany Twitter amerikana. Ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra dia avy ao, ary VERY dia vitsy avy any Japan UK, na firenena hafa.
Mifantoka be amin'ny hazakazaka, ary ny fanaovana olana amin'ny rivotra manify dia ao aminy ihany manavakavaka. Satria izany no zavatra hitanao voalohany: loko.
Ity tranga ity dia mitovy amin'ny #sailormoonredraw
tantsambo volana redraw asian toetra
tantsambo volana redraw tovovavy mainty
Volana vitsivitsy lasa izay, angamba tamin'ny Jolay 2020 - nivadika adihevitra ihany koa i #sailormoonredraw.
Twitter amerikana indray no nitsambikina satria tsy 'fotsy' ny tarehin-tsoratra. Ary nitsikera ny redrawing ny tarehin-tsoratra Japoney sy Mainty.
Toa manana olana amin'izany ny Twitter fanavakavahana, ary ny vondrom-piarahamonina anime dia manaitra hadalana foana rehefa tsy mila eo.
Ny fanavakavaham-bolonkoditra tsy an-kijanona amin'ireo mpanao saribakoly Anime Mainty, sy ireo “mpanentana” mijanona milamina toy ny mahazatra
Ireo teny nalaina indrindra momba ny Kaguya Sama Fans dia ho tia
Raha nantsoina toy ny horonantsary YouTube Clickbait i Anime, dia toy izany ny feony
Merry Christmas avy amin'ny Mecha Company!
47+ amin'ireo teny fampiasa Sakura Cardcaptor Sakura lehibe indrindra izay tsy manam-potoana
Fanontaniana 15 ilainao hapetraka alohan'ny hanombohana bilaogy anime
19+ Teny nalaina kilasika avy amin'ny zazavavy revolisionera Utena ho an'ireo mpankafy Anime
Kyoto Animation dia nanapa-kevitra ny 'hiroso' amin'ny fanimbana ny studio manomboka ny 25 Nov 2019
Tsy tokony ho diso fanantenana ireo mpankafy kaody Geass Merchandise Legit!
Ny famoriam-bola lehibe indrindra tokony ho hitanao amin'ny Hibike Euphonium!
Vehivavy Anime tsara tarehy 35+ tsara tarehy miaraka amin'ny toetra ratsy (Nomena an'i Japon)